About Us – MBC
အရှေ့တောင်အာရှဒေသရှိ မြန်မာနိုင်ငံ၌ လူမျိုးစု(၁၃၅)စု၊ လူဦးရေ (၅၁.၄)သန်းကျော်ရှိရာ ခရစ်ယာန်ဦးရေမှာ ၆.၃%ဖြစ်သည်။ ဆရာကြီးနှင့်မမယုဒဿန်တို့သည် အိန္ဒိယ နိုင်ငံတွင် သာသနာပြုရန်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ ထွက်လာခဲ့ရာ အခက်အခဲ အမျိုးမျိုးကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးနောက် ၁၉၁၃-ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၃)ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ မြန်မာစာပေ လေ့လာသင်ယူပြီး ဧဝံဂေလိပြုခဲ့ရာ၊ ၁၈၁၉-ခုနှစ်တွင် ပထမဦးဆုံး ယုံကြည်ပြောင်းလဲသူ ဦးနောကို နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပေးခဲ့ပြီး၊ ယုံကြည် လက်ခံသူများ တိုးပွားလာကာ၊ နှစ်ခြင်းအသင်းတော်များ စုစည်းလျက်၊ ၁၈၆၅-ခုနှစ်တွင် မြန်မာပြည်လုံး နှစ်ခြင်းသာသနာပြုအစည်းအဝေးကြီးကို စတင်ကျင်းပခဲ့သည်။ ၁၉၅၄-ခုနှစ်တွင် “ မြန်မာနိုင််ငံနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အသင်းချုပ်” ဟူ၍ အမည်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်များအားလုံး စုစည်း ပါ၀င်လျက် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်တွင် သခင်ယေရှု၏ ကယ်တင်ခြင်း တရားတော်မြတ်ကို ဟောပြော သက်သေခံခြင်းနှင့် ဥဿုံ သာသနာလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။
“ ကိုယ်ကျိုးစွန့်ဝန်ထမ်း” သည် မြန်မာနိုင်ငံနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အသင်းချုပ်၏ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်၍ “ ကားတိုင်” သည် အမှတ်လက္ခဏာ ဖြစ်သည်။ ပေးဆပ်ဆက်ကပ်ခြင်း၊ စွန့်လွှတ် စွန့်စားခြင်း၊ ဘုရားပေး ဆုကျေးဇူးတို့ကို ပုံဆောင်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အသင်းချုပ်သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ နှစ်ခြင်းအသင်းတော်များကို အခြေခံ၍ လူမျိုးစုနှင့် ဒေသန္တရအဖွဲ့ချုပ်များမှ တစ်ဆင့် ပါ၀င်ဖွဲ့စည်းထားပြီး၊ နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်များ ဝိညာဉ်ပါရမီ ရင့်ကျက်ရန်၊ ပြည့်စုံ ကြွယ်ဝသော အသက်တာကို လူတိုင်း ရရှိခံစား နိုင်ရန်၊ နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်တို့၏ အခြေခံယုံကြည်ချက်နှင့် ကျင့်သုံးမှု အမွေအနှစ်ကောင်းများတို့ကို ထိန်းသိမ်းမြှင့်တင်ရန်နှင့် နိုင်ငံ သားကောင်း ဖြစ်စေရန်အတွက် ၀တ်ပြုခြင်း၊ ထိရောက်သောသင်တန်းနှင့် ဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ခြင်း၊ စာအုပ်စာပေများ ပြုစု ထုတ်ဝေ ခြင်း၊ အခြား အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများတို့ကို ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ပြုစုထုတ်ဝေခြင်း၊ အရင်းအမြစ်များ ဝေမျှဖလှယ်ခြင်းနှင့် ပြည်တွင်း ပြည်ပရှိ ခရစ်ယာန် ဂိုဏ်းဂဏများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မိတ်ဆက်၍လည်းကောင်း၊ လက်တွဲ၍ လည်းကောင်း လုပ်ဆောင် သွားရန်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အသင်းချုပ်၏ သာသနာ့လုပ်ငန်းများ အတွက် ဘဏ္ဍာနှင့် ပံ့ပိုးမှုများကို အဖွဲ့ချုပ်များနှင့် အသင်းတော်များ၊ မိတ်ဖက်သာသနာ အဖွဲ့အစည်းများက ပေးလှူပါ၀င်လျက် ရှိပါသည်။ ဆရာကြီးယုဒသန်နေ့ အလှူငွေနှင့် ကမ္ဘာ့ပွဲတော်နေ့ အလှူငွေများကို သာသနာပြုခြင်းနှင့် လူမှုဝန်ထမ်းခြင်း အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ အတွက် အသုံးပြုပြီး၊ ရင်းနှီးမတည်ငွေ စီမံကိန်းများနှင့် အထူးအလှူငွေများအားဖြင့် နှစ်ခြင်းသာသနာလုပ်ငန်းများကို စီမံခန့်ခွဲအကောင်အထည်ဖော်လျက် ရှိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန် အသင်းချုပ်တွင် လူမျိုးစုနှင့် ဒေသန္တရ အဖွဲ့ချုပ် (၁၈)ဖွဲ့နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်သော အသင်းတော် – ဧမာနွေလ အသင်းတော် နှင့် ယုဒသန် အသင်းတော် (၂)ပါးဖြင့် ဖွဲ့စည်းပါ၀င်ပါသည်။
အသင်းချုပ်၏သာသနာလုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျ စီမံလုပ်ဆောင် ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ် အတည်ပြုနိုင်ရန် အခြေခံ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ ထားရှိလျက်၊ သင်းလုံးကျွတ် ဓမ္မသဘင်ကို သုံးနှစ်တစ်ကြိမ်၊ အုပ်ချုပ်စီမံရေးအဖွဲ့ အစည်းအဝေးကို တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်၊ အမှုဆောင်အဖွဲ့ အစည်းအဝေးကို တစ်နှစ် နှစ်ကြိမ်ကျင်းပကာ၊ လည်ပတ် အကောင်အထည် ဖော်လျက် ရှိပါသည်။
ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးအဖွဲ့၊ လေ့လာရေးနှင့် သုတေသနအဖွဲ့၊ မိတ်ဖက်သာနာလုပ်ငန်း ကော်မတီတို့မှာ အသင်းချုပ် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး၏ ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းမှုအားဖြင့် လုပ်ဆောင်လျက် ရှိပါသည်။
နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ်သည် မြန်မာနိုင်ငံခရစ်ယာန်အသင်းတော်များကောင်စီ(မခသက) (Myanmar Council of Churches – MCC)၊ အာရှပစိဖိတ်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (Asia Pacific Baptist Federation – APBF) ၊ အာရှခရစ်ယာန် ကွန်ဖရင့်(Christian Council of Asia) ၊ အမေရိကန် နှစ်ခြင်း အသင်းတော်များ (America Baptist Churches-USA)၊ ကမ္ဘာ့နှစ်ခြင်းသဟာယအဖွဲ့ (Baptist World Alliance – BWA)၊ ကမ္ဘာ့ခရစ်ယာန် အသငး်တော် များကောင်စီ (World Council of Churches – WCC) ၊ ကမ္ဘာ့ခရစ်ယာန်ဆက်သွယ်ရေးအဇွဲ့ (World Association for Christian Communication – WACC) ၊ EED- Germany ၊ Tear Fund-UK ၊ Diakonia – Sweden ၊ Helfer Project International- HPI – USA ၊ Samaritan Purse (Canada, Australia) တို့နှင့် ဆက်သွယ်အမှုဆောင်ပါသည်။
နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ် အရာရှိများနှင့် ဌာနတာဝန်ခံများ (၂၀၂၂-၂၀၂၄)
ဥက္ကဌ – Rev. Dr. စောဆမ်ဆန်
ဒုဥက္ကဌ – Rev. စောစမ်စန်၊ Rev. Dr. အေးနွယ်
အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး – Rev. Dr. ထန်ကျင့်လျန်း
တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး – Rev. Dr. ရောဘတ်ပွန်း
ဘဏ္ဍာထိန်း – ဆရာမ နန်းသူဇာမွန်
ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်များဌာန – Rev. Dr. စောအယ်သော
လူငယ်ဌာန – ဆရာ ဝင်းထွဋ်သာကြည်
စာပေနှင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးဌာန – ဆရာ စောစိုင်းလတ်မဟူရာဝါး
ခရစ်ယာန်ဓမ္မပညာဌာန – Rev. စောဟယ်ရီစင်
အမျိုးသမိးဌာန – ဆရာမ နန့်ဘက်ဒီထူး
အမျိုးသားဌာန – Rev. ဘရန်ဆိုင်း
ဧဝံဂေလိနှင့်သာသနာပြုရေးဌာန – Rev. ရိုဆန်း
သီသြလော်ဂျီဌာန – Rev. Dr. စောစိုင်းရပ်စ်စိန်
ခရစ်ယာန်ဆက်သွယ်ရေးဌာန – ဆရာမမေနှင်းဆီ
ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ပစ္စည်းထိန်းဌာန – ဆရာမ နန်းသူဇာမွန်
ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန – Rev. မန်းအောင်ဇော်မိုး
ခေါင်းဆောင်မြှင့်တင်ရေးဌာန – Rev. အိုက်နပ်တောင်း